Wararka aan kahelayno wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo badan oo ay N/hurayaasha CWXO ku xoraynayaan dhulka hooyo ee gumaysigu ku habsaday. Dagaaladda oo inta badan ay CWXO ku fuliyaan cadawga ayaa waxaa lagaga dilay inta la hubo 57 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac badan. Dagaaladaa ayaa u dhacay sidan;
4/12/13 Habaasle oo dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagu gaadhsiiyay khasaare aad ubadan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
7/12/13 Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka jarar weerar culus oo ay CWXO kuqaadeen xili habeenima ah oo ay uadeegsadeen hubka culculus waxaa ciidamada gumaysi lagu gaadhsiiyay khasaaro naf iyo maalba leh oo aan la faahfaahinin.
8/12/13 Dhagaxbuur dagaal kudhaxmaray ciidanka qalabka sida ee xoraynta Ogadenia iyo kuwa naf lacaariga ah ee gumaysi waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 10 askari 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/12/13 Dayr oo Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 3 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
14/12/13 Raaba oo Sagag katirsan iyo Baladul’aamin oo Fiiq katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay inta lahubo 1 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/12/13 Simane oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 8 askari 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/12/13 Dacar oo Gunagado udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/12/13 Bashuuro oo Fiiq katirsan dagaal xoogan oo kudhaxmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 17 askalri 21 kalana waa lagaga dhaawacay.
16/12/13 Dacar oo Gunagado katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
17/12/13 Gooro-libaax Dhuumood oo Sagag kawada tirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 2 askari. Isla maalintaa Maroodilay oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 11 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/12/13 Gooroniijo oo Jigjiga katirsan kamiin ay CWXO kaxadheen waxaa soogalay ciidamo uu gumaysigu leeyahay waxaana goobta lagaga dilay 5 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
21/12/13 Shabeelay oo Qabridahare katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen kuwa gumaysiga oo halkaas howl shacabka kadhan ah ka waday waxaana ciidankii wayaana lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.